Home Wararka Qarax xooggan oo ka dhacay degmada Wadajir ee Muqdisho
Qarax xooggan oo ka dhacay degmada Wadajir ee Muqdisho
Qarax xooggan oo jugtiisa si weyn looga maqlay Degmooyinka Muqdisho ayaa ka dhacay degmada Wadajir ee Gobolkani Banaadir, waxaana kasoo baxaya warar dheeraad ah oo ku aaddan Qarax.
Qaraxa oo ahaa ismiidamin ayaa wararku waxaa ay sheegayaan in uu ka dhacay meelu dhaw xerada ciidanka Nacnaca ee degmada Wadajir.
Qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa ayaa la sheegay in uu isku qarxiyay Maqaaxi laga shaaho, waxaana ka dhashay khasaaro soo gaaray dadkii goobta ku sugnaa, oo ay ku jiraan Askar sida la sheegay.
Previous article[Deg Deg]: Jen. Xuud oo loo shirqoolayo in Xamar Lagu Xero.
Next article[XOG] Fahad & Farmaajo oo heshiis gaar ah la galay General Xuud
Wareysigii Farmajo: Universal Ma Warbaahinta Qaranka ayey Ku biirtay?
Gaari ay lahaayeen Ciidanka Booliska Somalia oo si naxariis dara ah...